देश नै सिध्याइदिने डोनाल्ड ट्रम्पको धम्की, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
देश नै सिध्याइदिने डोनाल्ड ट्रम्पको धम्की, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई सिध्याइदिने धम्की दिएका छन् । उनले अमेरिकालाई नधम्काउन पनि चेतावनी दिएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यदि इरान लड्न चाहन्छ भने त्यो इरानको आधिकारिक अन्त हुनेछ । अमेरिकालाई कहिल्यै धम्की नदिनू ।’ ट्रम्पको यो ट्वीटलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच युद्धको बादल मडारिन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
इरान परमाणु सम्झौतालाई लिएर अमेरिका र इरानबीच केही दिनयता तनाव बढ्दै गएको छ । अमेरिकाले मध्यपूर्वमा अत्याधुनिक हतियारसहित आफ्ना सेनाको तैनाथी बढाएको छ ।
सन् २०१५ मा इरानसहित अमेरिका, चीन, रुस, ब्रिटेन, फ्रान्स र जर्मनीबीच परमाणु सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताको उद्देश्य इरानको परमाणु महत्वाकांक्षामा अंकुश लगाउनु थियो ।
अमेरिकाले गत वर्ष यस सम्झौता तोडेको थियो । इरानले पनि अहिले सम्झौताबाट आंशिक रुपमा अलग भएको जनाएको छ, अर्थात् सम्झौताका केही सर्त नमान्ने घोषणा गरेको छ । चीन, रुस, ब्रिटेन, फ्रान्स र जर्मनी भने अहिले पनि परमाणु सम्झौतामा सामेल छन् ।
इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएर ट्रम्प प्रशासनले उसको अर्थव्यवस्थामा नोक्सान पुर्‍याएको छ । इरानको मुद्राको मूल्य सबैभन्दा तल्लो स्तरमा पुगेको छ र महंगीको दर करिब चौगुणाले बढेको छ । त्यसैले इरानले भने आफूमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध नहटाए फेरि युरेनियम उत्पादन र बिक्री सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यता अष्ट्रियाली राष्ट्रपति अलेक्जेण्डर भान बेलेनले आफुले आगामी सेप्टेम्बरमा आकष्मिक निर्वाचन गर्न चाहेको बताएका छन् । राष्ट्रपतिको याे भनाई भष्टाचार काण्डलाई लिएर सरकार ढलेपछि आएको हो ।
नयाँ आकस्मिक निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छैन । तर राष्ट्रपति भान देर बेलेनले चान्सलर कुर्जसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, ‘मेरो पहल आकस्मिक निर्वाचन सेप्टेम्बरमा गर्नका लागि हुनेछ ।’
अष्ट्रियाली ‘भाइस चान्सलर’ तथा दक्षिणपन्थी दल फ्रिडम पार्टीका नेता हेन्ज क्रिश्चियन स्टार्चले आफुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि नैतिकताका आधार देखाउँदै शनिबार पद तथा पार्टी नेतृत्वबाट राजिनामाको घोषणा गरेका छन् ।
उनीमाथि राजनीतिक सहयोगका लागि सरकारी करार कुनै शक्तिशाली समूहलाई पारिदिन सम्झौता गरेको आरोप लागेको थियो । भाइस चान्सलरको राजिनामा चान्सलर सेवास्टियन कुर्जले स्वीकृत गर्नुभएको स्टार्चले बताएका छन् ।